SDB107-TP | Infinity-Semiconductor.com ထံမှရရှိနိုင် Micro Commercial Components (MCC) SDB107-TP စတော့အိတ် | Infinity-Semiconductor.com မှာအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူ SDB107-TP
နေအိမ်ထုတ်ကုန်များdiscrete Semiconductor ထုတ်ကုန်များDiodes - တံတား RectifierSDB107-TP
DIODE BRIDGE 1A 1000V SDB-1
704465 pcs stock
In Stock 704465 pcs
Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Surface Mount SDB-1
Micro Commercial Components (MCC) SDB107-TP
SDB107-TP PDF ကို Datasheet
SDB107-TP ဒေါင်းလုပ် Datasheet
Micro Commercial Components (MCC) SDB107-TP Buy
Micro Commercial Components SDB107-TP
Micro Commercial Co SDB107-TP
ဖေါ်ပြချက်: DIODE BRIDGE 1A 400V SDB-1
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 737354 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIP 10P FLUSH ACT. GOLD CONTACT.
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 44886 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIP 8P EXTENDED ACT. GOLD CONTAC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 46833 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIODE BRIDGE 1.5A 600V SDB-1
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 519868 pcs
ဖေါ်ပြချက်: BRIDGE RECT 1PHASE 200V 1A SDB-1
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 178870 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIODE BRIDGE 1.5A 400V SDB-1
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 170190 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIODE BRIDGE 1A 600V SDB-1
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 677118 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 63881 pcs
ဖေါ်ပြချက်: RECT BRIDGE 800V 1.5A SBD-1
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 182339 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIODE BRIDGE 1.5A 1000V SDB-1
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 441711 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIP 12P FLUSH ACT. GOLD CONTACT.
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 35515 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIP 9P EXTENDED ACT. GOLD CONTAC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 47469 pcs